पूर्वसचिव पत्नीको दर्दनाक हत्या, सीसीटीभीबाट भेटियो यस्तो तथ्य « Deshko News
पूर्वसचिव पत्नीको दर्दनाक हत्या, सीसीटीभीबाट भेटियो यस्तो तथ्य
कुनै–कुनै हत्याका घटना सुन्नेलाई नै पीडादायी हुन्छन् । पूर्वसचिव अर्जुन कार्कीकी पत्नी मुनाको सोमबार त्यस्तै निर्मम हत्या भएको छ । घटनामा घरायसी कामदार विजय चौधरी संलग्न रहेको सीसीटीभी फुटेजका आधारमा प्रहरी निचोडमा पुगेको छ ।
ललितपुर सानेपास्थित घरमै मुनालाई प्लास्टिकको पिर्काले हिर्काएर चौधरीले हत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ । ‘बिहान १० बजेर २० मिनेटतिर विजयले मुनालाई घाँटीमा डोरीले बाँधेर भुइँमा बजारेको देखिन्छ’, अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरी अधिकृतले भने, ‘मुना भुइँमा लडेपछि कपाल समाती टाउको बजारेर प्लास्टिकको पिर्काले हिर्काएको देखिन्छ ।’
उनको घरमा सुत्ने कोठा र बाथरुमबाहेक अन्यत्र सीसीटीभी छ । प्रहरीले अर्जुनका भनाइ, घरमा काम गर्ने अन्य कामदार र सीसीटीभीलाई आधार बनाएर अनुसन्धानको दायरा फराकिलो बनाएको छ ।
म घर आउँदा गेट बन्द थियो । बोलाएँ, बोलिनन् । गेट खोलेर भित्र छिरें । टेबलमा विजय (विजय चौधरी) पछारिएको थियो । भान्सामा छिरें । रगतमा लतपतिएको देखें । मैले केही सोच्न सकिनँ । प्रहरीलाई सम्झें, फोन गरेर बोलाएँ ।
पापीलाई सानैदेखि पालेर राखेको थिएँ । यस्तो घटना भयो । यस्तो आपत्ति आइलाग्यो, कसरी सम्हालिन सक्छु ? मुनाको हात बाँधिएको थियो । घाँटीमा डोरीले कसेर मारेजस्तो देखिन्छ । डाइनिङ हलमा भएको एउटा मेच भाँचिएको र प्लास्टिकको पिर्का टुक्राटुक्रा भएको देखें । त्यति गर्दासम्म उनले किन प्रतिकार गर्न सकिनन् ? अचम्म लागिरहेको छ ।
(पूर्वसचिव अर्जुन कार्कीले आफन्तसँग गरेको कुराकानीमा आधारित)
जुन हत्या घटनामा कामदारकै संलग्नता
फ्रान्सका लागि पूर्वराजदूत केशवराज झाको २०७५ भदौ ४ गते बबरमहलस्थित निवासमा हत्या भयो । घटनामा उनकै कामदार सानुकान्छा तामाङको संलग्नता खुल्यो । महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले सानुकान्छालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्‍यो । तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा उनी छुटे पनि पछि पुनः पक्राउ परे । उनी पुर्पक्षका लागि कारागारमा छन् । काम गरेको पैसा समयमा नपाएपछि आफूले झाको हत्या गरेको बयान उनले प्रहरीसमक्ष दिए ।
बूढानीलकण्ठ निवासी पार्वती ढकालको २०७४ साउन १२ गते हत्या भयो । उक्त घटनामा पूर्वकामदार सुदामा लामिछानेको संलग्नता पाइयो । नुवाकोट घर भई काठमाडौं तारकेश्वर बस्ने सुदामालाई प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो । उनले पैसाको निहुँमा पार्वतीको हत्या गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुल्यो । सुदामासहितको टोली गरगहना चोरी गरेर भागेको थियो ।
सेन्ट जेभियर्स स्कुलमा कार्यरत फादर थोमस ई ग्याफ्नेको २०५४ मंसिर २८ गते राति हत्या भयो । प्रहरीले घटनाको १८ वर्षपछि २०७२ वैशाखमा दोलखाका ढालबहादुर खड्कालाई पक्राउ गर्‍योे । कामको ज्याला नदिएका कारण ललितपुर झम्सिखेलस्थित कोठामा खुकुरी प्रहार गरी ग्याफ्नेको हत्या गरेको अभियुक्तले स्वीकार गरे । उनी दराजमा रहेको २२ हजार रुपैयाँ लिएर भागेका थिए ।
‘अधिकांश घटनामा आर्थिक लेनदेन जोडिन्छ’
कामदारले घरमालिकको हत्या यस्तै नै कारणले गर्छन् भन्ने अवस्था छैन । विगतका घटनाको विश्लेषण गर्ने हो भने पैसा जोडिएर आउँछ । लुट्ने मनसाय, काम गरेबापत पारि श्रमिक नदिने, केही दिउँला भनेर आश्वासन दिने तर पछि नदिएपछि हत्या गरेको हुन सक्छ । यौनसम्बन्धका कारण पनि कामदारले मालिकको हत्या गरेका उदाहरण छन् ।
कतिपयमा भने वादविवाद हुँदा आवेगमा पनि कामदारले हत्या गर्न सक्छन् । यही कारणले हत्या गर्‍यो भन्ने विषय छानबिनपछि देखिने कुरा हो । जस्तो : हामीले फादर ग्याफ्नेको हत्या घटनालाई पनि हेर्न सक्छौं । कामदारले पैसा नपाएकै कारण हत्या गरेको देखिन्छ । अधिकांश घटनामा आर्थिक लेनदेन जोडिएका छन् । अन्नपूर्ण दैनिक
(पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरीसँगको कुराकानीमा आधारित)